IGlycosylated hemoglobin - kuyini, futhi kuthiwani uma inkomba ingejwayelekile? > Ukuxilonga
I-Glycosylated hemoglobin hba1c incishisiwe
Isifo sikashukela singukugula okukhohlisayo, ngakho-ke kubalulekile ukuqonda i-glycated hemoglobin - siyini lesi sikhombisi nokuthi ungakudlulisa kanjani ukuhlaziya okunjalo. Imiphumela etholakele isiza udokotela ukuthi aphendule ngokuthi lowo muntu unoshukela wegazi ophakeme noma yini yonke into evamile, okungukuthi, unempilo.
I-Glycosylated hemoglobin - yini?
Kukhethwe iHbA1C. Lesi yisinkomba se-biochemical, imiphumela yaso ikhombisa ukugcwala kweglucose egazini. Isikhathi esihlaziyiwe yizinyanga ezi-3 zokugcina. I-HbA1C ithathwa njengesinkomba esifundisa kakhudlwana kunethonya lokuqukethwe ushukela. Umphumela, okhombisa i-glycated hemoglobin, uvezwa njengephesenti. Kubonisa ukwabiwa kwamakhompiyutha "ushukela" kumthamo ophelele wamaseli abomvu egazi. Amanani aphezulu asikisela ukuthi umuntu unesifo sikashukela, futhi isifo sishubile.
Ukuhlaziywa kwe-hemoglobin ye-glycosylated inezinombolo eziningi zezinzuzo:
isifundo singenziwa ngaphandle kokubheka isikhathi esithile sosuku, futhi akudingeki sikwenze ngesisu esingenalutho,
izifo ezithathelwanayo kanye nengcindezi eyandayo ayithinti imiphumela yalokhu kuhlaziywa,
ucwaningo olunjalo lukuvumela ukuthi uthole ushukela kusenesikhathi bese uqala ukwelashwa ngendlela esheshayo,
Ukuhlaziywa kusiza ukwenza isiphetho ngokusebenza ngempumelelo kokwelashwa kwesifo sikashukela.
Kodwa-ke, le ndlela yokucwaninga ukushiyeka ngaphandle kokubuyisa emuva:
izindleko eziphakeme - inentengo enkulu uma iqhathaniswa nokuhlaziywa kokuthola ushukela,
ngezinga elincishisiwe lama-hormone e-thyroid, i-HbA1C iyanda, yize empeleni, izinga likashukela wegazi lomuntu lincane,
ezigulini ezine-anemia, imiphumela ihlanekelwa,
uma umuntu ethatha amavithamini C no-E, umphumela ube mncane ngokukhohlisa.
I-Glycosylated hemoglobin - unganikela kanjani?
Ama-laboratri amaningi enza ucwaningo olunjalo, enza amasampula egazi esiswini esingenalutho. Lokhu kwenza kube lula ukuthi ochwepheshe bakwazi ukwenza lokho kuhlaziya. Yize ukudla kungayiphathi imiphumela, kubalulekile ukubika ukuthi igazi alithathwa esiswini esingenalutho. Ukuhlaziywa kwe-hemoglobin ye-glycosylated kungenziwa kokubili kusukela emthanjeni nangokusuka emunweni (konke kuya ngesibonelo somhlaziyi). Ezimweni eziningi, imiphumela yocwaningo ilungile ngemuva kwezinsuku ezingama-3-4.
Uma inkomba ingaphakathi kobubanzi obujwayelekile, ukuhlaziya okulandelayo kungathathwa eminyakeni eyi-1-3. Lapho kutholakala isifo sikashukela kuphela, kunconywa ukuhlolwa kabusha ngemuva kwezinyanga eziyisithupha. Uma isiguli sesivele sibhaliswe ku-endocrinologist futhi sinikezwe ukwelashwa, sinconywa ukuthatha isivivinyo njalo ezinyangeni ezi-3. Imvamisa enjalo izovumela ukuthola imininingwane yenhloso ngesimo somuntu kanye nokuhlola ukusebenza kwerejimeni yokwelashwa enqunyelwe.
Ukuhlolwa kwe-Hemoglobin ye-Glycated - Ukulungiselela
Lolu cwaningo luhlukile ngohlobo lwalo. Ukuze udlule ekuhlolweni kwegazi kwe-glycosylated hemoglobin, awudingi ukulungiselela. Kodwa-ke, izici ezilandelayo zingahlanekezela umphumela (zinciphise):
Ukuhlaziywa kwe-glycosylated (glycated) hemoglobin yenziwa kahle kakhulu ezindaweni zokucwaninga ezinemishini yesimanje. Ngenxa yalokhu, umphumela uzoba olunembile ngokwengeziwe. Kuyaqapheleka ukuthi izifundo ezindaweni zaselabhoratri ezihlukile ezimweni eziningi zinikeza izinkomba ezihlukile. Lokhu kungenxa yokuthi izindlela ezahlukahlukene zokuxilonga zisetshenziswa ezikhungweni zezokwelapha. Kungcono ukuthatha izivivinyo elabhoratri elifakazelwe.
Ukunqunywa kwe-glycosylated hemoglobin
Kuze kube namuhla, asikho isilinganiselo esisodwa esizosetshenziswa ama-laboratories wezokwelapha. Ukuzimisela kwe-glycosylated hemoglobin egazini kwenziwa ngalezi zindlela ezilandelayo:
I-Glycosylated Hemoglobin - Okujwayelekile
Le nkomba ayinobudala noma ukwahlukanisa ubulili. Imvelo ye-glycosylated hemoglobin esegazini kubantu abadala nasezinganeni ihlangane. Kusuka ku-4% kuya ku-6%. Izinkomba eziphakeme noma eziphansi zibonisa i-pathology. Ngokucacile, yilokhu okuboniswa yi-glycosylated hemoglobin:
I-HbA1C isuka ku-4% iye ku-5.7% - umuntu une-carbohydrate metabolism ngokulandelana. Amathuba okuthola isifo sikashukela awunakwa.
5.7% -6.0% - Le miphumela ikhombisa ukuthi isiguli sisengozini eyengeziwe ye-pathology. Akukho ukwelashwa okudingekayo, kepha udokotela uzoncoma ukuthi kudliwe i-carb ephansi.
I-HbA1C isuka ku-6.1% iye ku-6.4% - Ingozi yokuba nesifo sikashukela yinhle. Isiguli kufanele sinciphise inani lama-carbohydrate adliwayo ngokushesha futhi linamathele ekuncomeni kwabanye udokotela.
Uma inkomba ingu-6.5% - ukuxilongwa kokuqala kwesifo sikashukela. Ukukuqinisekisa, kunqunywa ukuhlolwa okungeziwe.
Uma i-glycosylated hemoglobin kwabesifazane abakhulelwe ihlolwa, okujwayelekile kuleli cala kuyafana nakwabanye abantu. Kodwa-ke, le nkomba ingashintsha kuyo yonke inkathi yokuzala umntwana. Izizathu ezibangela ukuvuza okunjalo:
I-Glycosylated hemoglobin yanda
Uma ngabe le nkomba ingaphezu kokujwayelekile, lokhu kukhombisa izinkinga ezinkulu ezenzeka emzimbeni. I-hemoglobin ephezulu ye-glycosylated imvamisa ihambisana nalezi zimpawu ezilandelayo:
ukululama kwenxeba isikhathi eside
ukwehla okubukhali noma ukwanda kwesisindo,
ukulahlekelwa amandla nokudangala,
I-Glycosylated hemoglobin ngenhla kwejwayelekile - kusho ukuthini?
Ukwanda kwale nkomba kubangelwa yizizathu ezilandelayo:
ukwehluleka kumzimba we-carbohydrate metabolism,
Igazi le-hemoglobin ye-glycated lizokhombisa ukuthi inkomba ingaphezulu kokujwayelekile, nazi izimo:
ku-mellitus yesifo sikashukela - ngenxa yokuthi inqubo yokuhlukanisa ama-carbohydrate iyaphazamiseka futhi amazinga e-glucose ayanda,
uma isiguli esinesifo sikashukela singalulwanga ngendlela efanele,
nge-anemia yokuntuleka kwe-iron,
ngemuva kokumpontshelwa igazi,
ku-uremia, lapho kukhiqizwa i-carbohemoglobin, into efana kakhulu nezakhiwo zayo nesakhiwo ku-HbA1C,
uma isiguli sisusa umgogodla, isitho esibhekene nokulahlwa kwamangqamuzana abomvu egazi.
I-hemoglobin ye-Glycated inyukile - yini okufanele uyenze?
I-Glycosylated hemoglobin (HbA1C) iyisibonakaliso se-biochemical samaphesenti egazini lamaprotheni e-hemoglobin axhumene ne-glucose. Ivumela okuthembeke kakhulu, ngokuqhathanisa nokuhlola kwegazi okujwayelekile kokuqukethwe ushukela, ukuthola inkomba yokuqukethwe kokuqukethwe kwama-molecule we-glucose ezinyangeni ezi-3 ezedlule. Kumele kwaziwe ukuthi inqubo ye-HbA1C ayincikile ebulilini bomuntu futhi iyafana ezinganeni nakubantu abadala.
Inani le-HbA1C linenani elibalulekile lokuxilonga ekuxilongeni kusenesikhathi i-mellitus yesifo sikashukela nokubheka ukusebenza ngempumelelo kokwelashwa kwalesi sifo. Ngaphezu kwalokho, ucwaningo lwenkomba luyenziwa lapho kukhonjwa:
ukuphazamiseka kwe-metabolic ebuntwaneni,
isifo sikashukela sokukhulelwa, esibonisa ukwanda okungakaze kubonwe ngaphambili kwe-glucose, kubonakaliswa kwabesifazane ngesikhathi sokukhulelwa,
thayipha u-1 bese uthayipha isifo sikashukela kwabesifazane abakhulelwa lapho benesifo,
isifo sikashukela esinomkhawulo wezinso okungajwayelekile,
umthwalo wesifo sikashukela
Ukubaluleka kwalokhu kuhlaziywa kunqunywa ngokuxilongwa kwangaphambi kokutholwa kwenhliziyo, ukuthuthukiswa okungahambi kahle kwemithambo yegazi, ukutholwa kokulimazeka okubukwayo, ukwenzeka kwe-nephropathy ne-polyneuropathy, njll. E-Russia, ekuncomeni kwe-WHO, ucwaningo olunjalo lusetshenzisiwe kusukela ngo-2011.
Inzuzo enkulu ekuhlaziyweni kwe-glycosylated hemoglobin ukungabikhona kokulungiselela kwangaphambili ngaphambi kokulethwa kwayo. Lolu cwaningo lwenziwa mhlawumbe ngesampula yegazi engena ngaphakathi esigulini, noma ngokuthatha isampula emunweni (kuya ngohlobo lwe-analyzer) ngevolumu engu-2-5 ml. Kulokhu, kungenzeka imizwa engemnandi, ibangelwe ukusetshenziswa kwe-tourniquet kanye nokukhohlisa amasampula egazi.
Ukuvimbela ukuqubuka, uketshezi oluphathelene nomzimba luhlanganiswa ne-anticoagulant (i-EDTA), enikela empilweni yeshelufu elide (kufika kuviki elingu-1) ngaphansi kombuso othile wokushisa (+ 2 + 5 0 С).
ukukhulelwa - kanye, emavikini ayishumi nane,
Thayipha isifo sikashukela esingu-1 - isikhathi esingu-1 ezinyangeni ezi-3,
Uhlobo 2 isifo sikashukela - isikhathi esingu-1 ezinyangeni ezi-6.
Ukuhlaziywa uqobo lwenziwa ezimweni zelebhu, lapho, ngokusebenzisa imishini ekhethekile, ukugcwala kwe-plasma ye-HbA1C kunqunywa. Kulokhu, kusetshenziswa izindlela ezilandelayo:
Phakathi kwamathuluzi angenhla asetshenziselwa ukunquma inqubo ejwayelekile ye-HbA1C, kunikezwa indlela ye-chromatography ye-liquid, ngoba ivumela izinga eliphakeme lokunemba lokuthola ukuqoqwa kwe-hemoglobin ye-glycosylated futhi ukubona ubukhona bokuphambuka kwayo kusuka esimweni esamukelekayo.
Inqubo yokuthola amandla we-glycosylated hemoglobin ayinzima. Kodwa-ke, ukuhunyushwa kwezinkomba zokugcina kungahle kube yinkimbinkimbi ngomehluko kubuchwepheshe belebhu, kuhlangene nezimpawu zomuntu. Ngakho-ke, lapho ufunda izinga le-hemoglobin ye-glycated kubantu ababili abanezinkomba ezifanayo zoshukela wegazi, umehluko kumanani wokugcina we-HbA1C ungafinyelela ku-1%.
Ekwenzeni lolu cwaningo, kungenzeka ukuthi uthole ukukhuphuka okungamanga kwe-HbA1C, ngenxa yokunyuka kwenqwaba ye-fetus hemoglobin egazini (okujwayelekile kumuntu osekhulile kufike ku-1%), kanye nokwehla okungamanga okuvela kwizifo ezinjenge-hemorrhages (acute and chronic), uremia, kanye kanye ne-hemolytic anemia.
Izazi zesimanjemanje nezazi zesifo sikashukela zibeka phambili inguqulo ephathelene nobuntu balesi sikhombisi ngezigaba ezithile zabantu. Ngakho-ke, izici ezilandelayo zithonya izinga layo:
ukuba khona kwezifo ezibuye zilingane, ubude bazo nobukhali.
Ukuze kube lula ukuhlola, izimiso ze-HbA1C zinikezwa etafuleni.
Mayelana nokujwayelekile kwesikhombi esifundiwe
Ngaphambi kokuba uvakashele ihhovisi likadokotela ukunikela ngegazi ukuthola inani le-hemoglobin ye-glycosylated, awudingi ukwenza ezinye izinqubo ezithile zokulungiselela.
Ungathatha izinto ezibonakalayo zokuhlolwa kwelebhu noma ngasiphi isikhathi, ekuseni nase ntambama.
Ngaphambi kokuvakashela umtholampilo, ungathola kalula isidlo sasekuseni nenkomishi yetiye noma yekhofi. Ukudla obekuthathwe ngaphambi kocwaningo, noma ezinye izici azikwazi ukufaka ithonya elibucayi ekubonisweni kwemiphumela yako.
Ukuphela kwento engahlanekezela imiphumela yokuhlolwa kwegazi kwe-glycosylated hemoglobin ukusetshenziswa kwemithi ethile ebhekele ukwehlisa ushukela wegazi.
Le mishanguzo iyingxenye yeqembu elinezidakamizwa futhi ichazwe ngodokotela, ngakho-ke odokotela, njengomthetho, bayazi ukuthi imiphumela yokuhlaziywa kwesiguli ethatha ukwelashwa ingahle ihlanekezelwe.
Izinga le-glycosylated hemoglobin egazini le-peripheral lomuntu ophilile lingaphansi kwama-5.7%. Kuhle ukukhumbula ukuthi le nkomba ingumkhawulo ophezulu wesilinganiso, okwedlulele okungahle kubonise ukwehla okunzima kweglucose. Lokhu kuvamile kusebenza kwabesilisa nabesifazane.
Amanye ama-laboratories awasebenzisi kuphela iphesenti le-hemoglobin ye-glycosylated egazini, kodwa futhi nenani layo lokulinganisa.
Ukuba khona kwe-hemoglobin ye-glycosylated egazini labantu abaphilile kufanele kuguquke ngaphakathi kwesilinganiso sereferensi kuqala kusuka ku-1.86 futhi kuphele ngo-2.48 mmoles.
Imvamisa kwabesifazane nabesilisa abaphethwe yisifo sikashukela, kepha ngokunemba okulandela izincomo zikadokotela zokugcina isimo siphilile, sisuka kumaphesenti ayisikhombisa kuya kwayisikhombisa nesigamu.
Uma "ushukela" wegazi uwela ngaphakathi kwemingcele yalesi sigaba sereferensi, kusho ukuthi isiguli senza konke okusemandleni ukugcina impilo ejwayelekile futhi sinciphise nengozi yokubhujiswa komzimba, engenakugwenywa kwisifo sikashukela esingakhokhwanga.
I-Glycosylated hemoglobin ngesikhathi sokukhulelwa kwabesifazane abanempilo akufanele ibe ngaphezulu kune-5.7% esivele isaziwa.
Uma izinga lalesi sikhombisi lisusela kumaphesenti angama-5,7 laya ku-6.4, khona-ke odokotela bazise iziguli ngokwenzeka kwesifo sikashukela.
Uma ekuhlolweni kwegazi izinga le-hemoglobin yohlobo lwe-glycosylated lidlula inani lamaphesenti ayi-6.5, khona-ke iziguli zinikezwa ukuxilongwa kokuqala kwesifo sikashukela i-mellitus.
Okuningi Mayelana nesifo sikashukela
Isifo sikashukela i-mellitus, esiyizinhlobo ezimbili, isifo esiyingozi esidala ukulimaza umzimba womuntu.
Lapho ushukela wegazi uphakanyisiwe, umzimba wesiguli uqala ukuzabalaza nezinga lawo elandayo, kusebenze amandla ahlukahlukene acindezela (noma asuse kancane inkinga).
Ukuze sinciphise ubungozi bemiphumela emibi kakhulu yesifo sikashukela kanye nokubuyisa izinga lokuphila elifanelekile kumuntu onalesi sifo, kufanele kusetshenziswe imithi ekhethekile.
Isibonelo, ukuze kwenziwe umsebenzi ojwayelekile ube ngumuntu ophethwe isifo sikashukela sohlobo 1, unqunyelwe ukusetshenziswa kwemijovo ngesisombululo se-insulin.
Abantu abanesifo sikashukela sohlobo lwe-2 isifo sikashukela noma ukubekezelela ukubekezelela ushukela kubizwa amaphilisi anqunyiwe anomthelela we-hypoglycemic noma okwandisa ukuzwela kwe-glucose izicubu.
Ukwelashwa okungalungile noma ukungatholakali kwayo ngokuphelele kungakhuphula ipharamitha elifundiwe ngokuhamba kwesikhathi.
Lapho uhlobo lwe-hemoglobin lwe-glycosylated luphakanyisiwe, isimo esibizwa nge-hyperglycemia siyabonakala ezigulini. Lesi simo se-pathological sinezimpawu eziningana ezithile ezikhethekile.
Izimpawu ze-hyperglycemia (isimilo sabantu abanenkinga yokumelana ne-insulin futhi abakuqinisekisile kepha okungahambisani kahle nesifo sikashukela):
ukukhathala, ukozela, ukuzizwa ukhathala njalo,
ukoma, ukuvusa ukusetshenziswa okuthe xaxa kwamanzi (nakho, okuholela ekwakhekeni kwe-edema),
ukubonakala komzwelo wendlala “ongazelelwe” ongafikelwa umuntu ngisho nangemva nje kokudla okunzima,
Izinkinga zesikhumba (ukoma, ukulunywa, ukuvutha, ukuqhuma kwe-etiology engaziwa),
ukwehla kwekhwalithi yokubuka.
Ngokwehlukana, kufanele kushiwo ukuthi kwezinye izimo ezigulini i-hemoglobin yohlobo lwe-glycosylated kungenzeka ingakhuphuki, kepha kunalokho incishiswe.
Ngokwehla okungatheni kwale nkomba ezigulini, izinguquko eziphawulekayo enhlalakahleni ziyabonakala.
Kodwa-ke, kulula kakhulu ukubhekana nezinga elincishisiwe le-hemoglobin ye-glycosylated kunezimo lapho lesi sikhombo sanda khona.
Izimbangela ezivame kakhulu zokuncipha okukhulu kwezinga le-glycosylated hemoglobin ukopha kakhulu (kufaka phakathi kwangaphakathi) noma i-anemia okhule ngenxa yokuntuleka kwensimbi.
Kwezinye izimo, uhlobo olwehlisiwe lwe-glycosylated ye-hemoglobin kungenzeka ukuthi lubangelwa ukusetshenziswa kabi kwezidakamizwa ezisetshenziselwa ukubuyisela isifo sikashukela sohlobo 2, ukudla okungenama-carbohydrate, noma izifo ezithile zofuzo eziqondile.
Ukubuyisela uhlobo lwe-hemoglobin ye-glycosylated back, kufanele alalelisise izincomo zikadokotela. Ikakhulu, udinga ukulandela indlela ethile yokudla "yokwelapha" futhi uphile impilo enempilo.
Abantu abanale nkomba benyukile kufanele bayeke ukudla amaswidi (noma banciphise ukudla kwabo) futhi banciphise inani lokudla okune-carbohydrate ekudleni kwabo nsuku zonke.
Kungenzeka ukunciphisa ukubekezelelana kwezicubu zomzimba ku-glucose ngokuqala ukudlala imidlalo. Ngokuzivocavoca okukhulu komzimba, ushukela uzoshiswa kahle kakhulu kunendlela yokuphila engenzi lutho.
Abantu abanokubekezelela i-glucose abatholwe ngesikhathi sokuhlolwa kwegazi elabhorethali ukuthola uhlobo lwe-hemoglobin ye-glycosylated kufanele basebenzise imishanguzo ekhethekile ekhulisa ukuzwela kwezicubu.
Ukwelapha usebenzisa lezi zidakamizwa kukhombisa ukusebenza kahle okuphezulu futhi kukuvumela ukuthi ulondoloze inempilo yomuntu, kumsize ngezimpawu ezingezinhle ze-hyperglycemia.
Imvamisa, uma kunezinkinga nge-digestibility ye-glucose, izidakamizwa zibekiwe, isithako esiyisisekelo esisebenzayo sayo yi-metformin.
Izidakamizwa ezivame kakhulu futhi ezisetshenziswayo zalesi sigaba zithathwa njengezimali ezibizwa nge- "Siofor" noma "Glucophage."
Bathengiswa ngendlela yamalungiselelo wethebhulethi abanokuqukethwe okuhlukile kwento esebenzayo (esukela kumakhulu amahlanu kuya kwayinkulungwane yamakhulu).
Ukuvela kwanoma yiziphi izimpawu ezingakhombisa izinkinga ngokufakwa kweglue kuyinto isikhathi sokuhambela udokotela ojwayelekile.
Ngemuva kokuthola imininingwane ephathelene nesimo sesiguli nokuqoqa eminye imininingwane edingekayo yokuqopha umlando wokuqala wezokwelapha, odokotela banquma izivivinyo zaselebhu ezigulini, imiphumela yazo ezocacisa isithombe bese inquma indlela efanelekile, futhi okubaluleke kakhulu, yokwelashwa okusebenzayo.
Ukuntuleka kokulungiswa okwanele kwenkinga kungaholela emiphumeleni emibi, ukubukeka kwayo kungeke kugwenywe.
Uhlobo luni lokuhlaziya lolu?
Olunye ucwaningo olufundisayo nolunembile kakhulu ekuhlolweni kwesifo sikashukela ukuhlaziya ukuthola inani lama-HbA1C. Ucwaningo olunjalo nalo lwenziwa ukuqapha isimo seziguli ezinesifo sikashukela. Ukuhlelwa okuvelayo kuzosivumela ukuthi siqonde ukuthi kusebenza kangakanani ukwelashwa okukhethiwe, noma ngabe isiguli sinamathela ekudleni noma singanaki izincomo zikadokotela.
Ngabe ukuhlolwa kwe-hemoglobin ye-glycosylated kungcono kanjani kunokuhlola ushukela ojwayelekile? Nazi izinzuzo ezibalulekile:
amasampula egazi angenziwa nganoma yisiphi isikhathi sosuku, noma ngabe isiguli sidlile ukudla noma cha,
imiphumela yocwaningo ayithintwa yizinto ezifana nokuxineka, ukusebenza komzimba, ukuba khona kwezifo (ngokwesibonelo, ukutheleleka komoya okuphathelene nokuphefumula), kanye nemithi (okuwukuphela kwento izidakamizwa ezisetshenziselwa ukunciphisa ushukela wegazi ngesikhathi sokusetshenziswa isikhathi eside).
Kodwa-ke, ukuhlaziywa kunezithiyo zako, kungukuthi, okokuqala:
izindleko eziphakeme, isifundo sibiza kakhulu kunokuvivinya ushukela ojwayelekile,
emadodeni nakwabesifazane abahlushwa i-hypothyroidism noma i-anemia, imiphumela yokuhlaziya ingaba yimbi. Isibonelo, ngokusebenza okwehlisiwe kwe-thyroid, i-glycosylated hemoglobin ingandiswa, naphezu kokuthi ushukela ophelele ungaphansi kwemingcele evamile.
Izici zokuxilongwa kwabesifazane abakhulelwe
Ukusebenzisa ukuhlaziya ku-HbA1C ekutholakalweni kwabesifazane ngesikhathi sokukhulelwa akunangqondo. Iqiniso ukuthi le nkomba izokwandiswa kuphela uma ukugcwala kweglucose egazini kuphakeme kunokwejwayelekile ezinyangeni ezimbalwa.
Kusukela ngesikhathi sokukhulelwa, ukwanda kokuhlushwa ushukela kuyaphawulwa, njengomthetho, kusukela ezinyangeni eziyi-6, kusetshenziswa ukuhlaziya, i-pathology ingatholakala kuphela eduze kokuzala kwengane. Okwamanje, ushukela owedlulele uzoba nesikhathi sokulimaza, okwenza impilo ikhulelwe. Ngakho-ke, ngesikhathi sokukhulelwa, kunconywa ukusebenzisa ezinye izindlela zokucwaninga, ikakhulukazi, ukuhlaziywa kokubekezelelwa kwe-glucose.
Njengoba sekushiwo, inzuzo enkulu yokuhlaziywa ukuthi ayidingi ukulungiswa. Ukuhlaziywa kungathathwa nganoma yisiphi isikhathi esikahle, akudingekile ukuza elabhoratri esiswini esingenalutho.
Isampula yegazi ingathathwa kokubili kusuka emthanjeni nasesandleni somunwe. Kuya ngokuphelele kuhlobo lwe-analyzer olusetshenzisiwe elebhu futhi akukuthinti imiphumela. Kulolu cwaningo, kuyadingeka ukunikela nge-2-5 ml yegazi. Kukangaki ngidinga ukuhlolwa?
Ngohlobo 1 sikashukela - udinga ukunikela ngegazi njalo ezinyangeni ezintathu,
Ngohlobo 2 sikashukela - kanye ezinyangeni eziyisithupha,
Engcupheni yokuthola isifo sikashukela kowesifazane okhulelwe, udinga ukunikela ngegazi kanye ngesikhathi samasonto angama-10-12.
Ukuthola imiphumela kungahle kube nzima ngenxa yomehluko kubuchwepheshe bokucwaninga nezimpawu eziqondene neziguli.
Iseluleko! Kubantu ababili abanoshukela wegazi ofanayo, ukusakazeka kwamanani lapho wenza ukuhlaziya ku-HbA1C kungaba yi-1%.
Uma umuntu enokuqukethwe kwe-HbA1C okungaphansi kwama-5.7%, khona-ke lesi yisimo esejwayelekile, futhi le nkomba iyafana kwabesifazane nabesilisa. Uma ukuhlaziya kunikeze umphumela onjalo, khona-ke ingozi yokuba nesifo sikashukela incane.
Uma okwejwayelekile kudlulwa kancane (phakathi kuka-5.7-6.0%), khona-ke singakhuluma ngengozi ekhulayo yokuthola ushukela. Umuntu kufanele abukeze ukudla kwakhe futhi andise ukusebenza komzimba.
Uma i-HbA1C iphakanyiselwe ku-6.1-6.4%, khona-ke ukuxilongwa kwe-prediabetes kungenzeka. Ukuxilongwa kokuqala kwesifo sikashukela ekuqaleni kwesigaba kwenziwa uma inkomba ingu-6.5% noma ngaphezulu. Kudingeka ezinye izifundo ukuze kuqinisekiswe ukutholakala kwale sifo.
Isizathu esiyinhloko sokuthi amazinga e-HbA1C aphakanyisiwe uhlobo 1 noma isifo sikashukela esingu-2. Ngaphezu kwalokho, okujwayelekile kwento kungadlulwa ezimeni:
I-anemia yokuntuleka kwe-iron, imiphumela yokuhlaziywa kwalesi sifo iyanda, ngoba kunokuntuleka kwe-hemoglobin yamahhala,
ukudakwa komzimba - izinsimbi ezisindayo, utshwala,
ukuhlinzwa ukuze kususwe i-spleen, lokhu kuholela ekwandeni kwesikhathi sokukhona kwamangqamuzana abomvu egazi, ngenxa yalokho, izinga le-HbA1C nalo lenyuka.
Uma ukuhlushwa kwe-HbA1C kuphansi kunalokho okujwayelekile, khona-ke lokhu kungakhombisa i-hypoglycemia. Ngaphezu kwalokho, i-glycosylated hemoglobin incishiswa ngokulahleka okukhulu kwegazi nokumpontshelwa kwegazi.
Esinye isimo lapho iHbA1C yehliselwa khona yi-hemolytic anemia, ebonakala ngokuncipha kwesikhathi sokuphila kwamangqamuzana abomvu egazi. Ezigulini ezinesifo sikashukela, inqubo ye-HbA1C ingaphansi kuka-7%, uma kuvamile ukwedlula, ukwelashwa kufanele kulungiswe.
Ngakho-ke, ukuhlolwa kwegazi kokuqukethwe kwe-glycosylated hemoglobin ukuhlaziywa okunolwazi. Iqiniso ngukuthi imvelo yokuqukethwe kwalesi sici iyafana kubo bonke abantu - abesilisa, abesifazane, intsha nezingane. Kulokhu, izinkomba ngeke zincike ekutheni umuntu uzilungiselela ngokucophelela kangakanani isifundo.